Wasiirka Arrimaha gudaha Soomaaliya oo ka qeyb galay shirka Wasiirada arrimaha gudaha Carabta – idalenews.com
Wasiirka Arrimaha gudaha Soomaaliya oo ka qeyb galay shirka Wasiirada arrimaha gudaha Carabta
Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Amniga Qaranka C/kariin Xuseen Guuleed ayaa ka qeyb galay shirka wasiirada arrimaha dibada Carabta, kaasoo lagu soo gaba gabeeyay magaalada Riyadh ee dalka Sacuudi Carabiya, kaasoo laga soo saaray go’aano muhiim ah.
Mr Guuleed ayaa sheegay in kulankan looga hadlay arrimo badan oo quseeyay ammaanka gudaha ee dalalka Carabta, iyo sidii wasiirada arrimaha gudaha ee dalalkaas ay iskaashi uga sameyn lahaayeen ammaanka iyo ka hortagida falalka argagixisada.
“Shirkaas waxaa laga soo saaray go’aano muhiim ah, sidii wasiirada arrimaha gudaha iskaashi dhanka ammaanka iyo sidii falalka argagixisada iyo kooxahan dhibaatada ku haya dalalka Musliimta looga hortagi lahaa iyo arrimaha burcad badeeda”ayuu yiri C/kariin Guuleed.
Sidoo kale waxaa uu xusay in arrimaha Soomaaliya ay qeyb ka aheyd, ajandayaasha shirka looga hadlay, taasoo uu tilmaamay wasiirku inuu xaalada dalka uu uga faah faahiyay Wasiirada arrimaha gudaha Carabta.
Wasiirka ayaa sheegay in kulamo gooni gooni ah uu la qaatay qaar ka mid ah wasiiradii arrimaha gudaha ee ka socday dalalka Carabta, waxaana uu tibaaxay in dalalka inuu u cadeeyay is bedelka ka jiro dalka iyo dadaalada dowladda wado.
Si kastaba ha ahaatee kulankan wasiirada arrimaha dibada ee dowladaha carabta ayaa noqonaya kii u horeeyay ee Wasiir C/kariin uu ka qeyb galo, tan iyo markii loo magacaabay xilkan dhamaadkii sanadkii hore.
Taliska Booliska oo ka warbixiyay howl galo dad lagu qab qabtay oo xalay laga sameeyay Xaafadaha Muqdisho
Dagaal culus oo dhimasho iyo dhaawac dhaliyay oo ka dhacay duleedka Baydhabo